ယ္ခု သီတင်းပတ်အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့် မှတ်သားဖွယ်သတင်းများ (၂၁.၆.၂၀၁၁- ၂၈.၆.၂၀၁၁), interesting news (21.6.2011-4.7.2011) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ယ္ခု သီတင်းပတ်အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့် မှတ်သားဖွယ်သတင်းများ (၂၁.၆.၂၀၁၁- ၂၈.၆.၂၀၁၁), interesting news (21.6.2011-4.7.2011)
ယ္ခု သီတင်းပတ်အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့် မှတ်သားဖွယ်သတင်းများ (၂၁.၆.၂၀၁၁- ၂၈.၆.၂၀၁၁), interesting news (21.6.2011-4.7.2011)
Posted by eros on Jun 21, 2011 in Myanma News, News | 44 comments
ဒေါ်လာ၊ FEC နှင့် မြန်မာငွေလဲလှယ်မှုအကြောင်း သတင်းများ။
ဒေါ်လာ၊ FEC နှင့် မြန်မာငွေလဲလှယ်မှု ဈေးနှုန်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အကြောင်းအရာ သတင်းများကို မြန်မာတိုင်းမ် မြန်မာဘာသာ သတင်းဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသော သတင်းများကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
ဈေးကွက်အတွင်း ကျပ်ငွေလိုအပ်မှု မြင့်တက်နေခြင်းကြောင့် ဒေါ်လာငွေတန်ဖိုး ကျဆင်းနေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်ကြ
အိမ်ခြံမြေငှားရမ်း ခေါ်ဆိုမှု မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ပြောင်းလဲလာ
ဒေါ်လာစားတွေနဲ့ ကျပ်ငွေစားတွေ အားပြိုင်တဲ့ခေတ် ရောက်နေပြီလား
အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးနှင့်အတူ ရွှေဈေးကျလာ၊ အိမ်ခြံမြေဈေး မြင့်တက်
နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းလျော့ကျလာမှု အခြေခံထုတ်လုပ်သူများကို ထိခိုက်နိုင်
မြန်မာကျပ်ငွေလဲနှုန်း မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် ကုလအစီအစဉ်များ ဘဏ္ဍာရေး လိုငွေပြ
နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း ကျဆင်းလာခြင်းကြောင့် စက်သုံးဆီဈေးကျ
ငွေဈေးကျမှု အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းကို ထိခိုက်လာ
နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း ကျဆင်းနေချိန်တွင် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ဆန်တင်ပို့သည့်လုပ်ငန်းရှင်များ အခက်တွေ့လျက်ရှိ
ကချင်ပြည်နယ်မှ တိုင်းရင်းသား အချို့ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရွှေ့ပြောင်း ထွက်ခွာ
ကချင်ပြည်နယ်တွင်းမှ တိုင်းရင်းသား အချို့သည် မိမိနေထိုင်ရာ ဒေသကို လတ်တလောအားဖြင့် စွန့်ခွာ၍ တရုတ်နိုင်ငံတွင်းသို့ ရှောင်တိမ်းမှုများ ရှိနေကြောင်း သတင်းရရှိပါကြောင်း၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ဒုတိယပတ် အတွင်း စတင် ဖြစ်ပေါ်သော စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး မငြိမ်သက်မှုများကြောင့် ဗန်းမော်ခရိုင် အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ ဖြစ်သော ဗန်းမော်မြို့နယ်၊ မိုးမောက်မြို့နယ်၊ မန်စီမြို့နယ် တို့တွင် ဒေသခံ ပြည်သူများ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ဖြစ်ပေါ် လျက်ရှိကာ လတ်တလောတွင် ယင်းမြို့များမှ ဒေသခံများ ပြောင်းရွှေ့မှု မရှိသေးသော်လည်း နယ်စပ်နှင့်နီးသော ဒေသများမှ တိုင်းရင်းသားအချို့ ပြောင်းရွှေ့မှု ရှိလာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံတို့ထံမှ သိရှိရပါကြောင်းကို Eleven Media Group သတင်းဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
အရေးကြီးသည့် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်လိုသော ရည်မှန်းချက် တစ်ခုတည်းဖြင့် မိမိတပ်မတော်သားများနှင့် KIA အဖွဲ့အကြား တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများမှတဆင့် ရှင်းလင်း ဖော်ပြ
ကချင်ပြည်နယ်တွင်းမှ အရေးကြီးသည့် အရင်းအနှီးတန်ဖိုး၊ ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး ကြီးမားသညရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်လိုသည့် ရည်မှန်းချက် တစ်ခုတည်းဖြင့် မိမိ တပ်မတော်သားများနှင့် KIA အဖွဲ့အကြား တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများ၌ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့က ရှင်းလင်းဖော်ပြချက် အရ သတင်းရရှိကြောင်း၊ ကချင်ပြည်နယ် အခြေစိုက် KIA အဖွဲ့သည် ကချင်ပြည်နယ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများကို တားမြစ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ မအောင်မြင်အောင် နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေ သည့် တရုတ်နိုင်ငံသား ၀န်ထမ်းများကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ဟန့်တား နှောင့်ယှက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများက ဖော်ပြကြောင်း၊ စီမံကိန်းတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသည့် DUHD ကုမ္ပဏီမှ တရုတ်နိုင်ငံသား ၂၁၅ ဦး ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့ အတွင်း ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားပြီ ဖြစ်ကာ စက်ရုံအား ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့မှ စတင် ရပ်နားထားသည်ဟု ဆိုကြောင်းသတင်းကို Eleven Media Group သတင်းဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
အစိုးရဝဘ်ဆိုက်များကို အင်တာနက်ပေါ်မှ တိုက်ခိုက်မှုများ နိုင်ငံတကာ အကူအညီဖြင့် ကာကွယ်မည်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံပိုင် Web Portal ရတနာပုံ ဝက်ဆိုက် အပါအဝင် အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာန ဝက်ဆိုက်များသို့ အင်တာနက်ပေါ်မှ အနှောက်ယှက်ပေး တိုက်ခိုက်မူများကို ကုလသမဂ္ဂနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့ချုပ်၏ အင်တာနက် လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ အထူးအဖွဲ့ International Multilateral Partnership Against Cyber Threat (IMPACT) ၏ အကူအညီဖြင့် ကာကွယ်သွားရန် ရှိကြောင်း နေပြည်တော်၌ ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အစိုးရသစ်၏ အီလက်ထရွန်နစ် လုပ်ငန်းစဉ်များ အရှိန်မြင့်တင်ရေး e-Government လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆွေးနွေးပွဲ ဒုတိယနေ့တွင် ဆက်သွယ်ရေး စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းထွန်းက ပြောကြားကြောင်း သတင်းကို The Voice Weekly သတင်းဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်း – နမ္မတီး ရထားလမ်းပေါ်ရှိ တံတား ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွား
ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းမြို့နှင့် နမ္မတီး ကျေးရွာအုပ်စုကြား ရထားသံလမ်းကူး နမ္မတီးတံတားတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဇွန်လ ၁၅ ရက် နံနက် ၄ နာရီ ၅၅ မိနစ်ဝန်းကျင်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက The VoiceWeekly သို့ ဆက်သွယ် ပြောကြားကြောင်း
ယင်းဗုံးပေါက်ကွဲမှုမှာ မန္တလေး – မြစ်ကြီးနား ရထားလမ်း မိုင်တိုင် ၆၉၁ ၊ တံတားအမှတ် ၆၇၄ ဖြစ်ပြီး အရှည် ၃၂ဝ ပေရှိသော နမ္မတီးချောင်း သံလမ်းကူးတံတားတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံများသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်များအရ သိရကြောင်း သတင်းကို ဒေသခံများ၏ ပြောကြားချက်များနှင့်တကွ The Voice Weekly သတင်းဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ဥက္ကံ၌ လူ ၆၀ ကျော် အစာအဆိပ်သင့်
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဥက္ကံမြို့ နယ် အင်ပြင်ကုန်း ကျေးရွာ၌ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ ဝန်းကျင်တွင် အလှူအိမ်၌ ဝက်သားနှင့် အာလူးဟင်း စားသုံးမိရာမှ လူ ၆၀ ဦးကျော် အစာအဆိပ်သင့်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဥက္ကံမြို့ ရှိ တိုက်နယ်ဆေးရုံ တာဝန်ခံ ဆရာဝန် တစ်ဦးက အတည်ပြု ပြောကြား သတင်းကို သက်ဆိုင်သူများ၏ ပြောကြားချက်များနှင့်တကွ The Voice Weekly သတင်းဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
အစိုးရသစ် အီလက်ထရွန်နစ် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆွေးနွေးပွဲ ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစကားလုံး ပြဿနာ ဖုံးလွှမ်း
ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုစနစ် (Good Governance) နှင့် သန့်ရှင်းသော အစိုးရသစ် တစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာရေး အတွက်ရည်ရွယ်၍ ဝန်ကြီးဌာနများတွင် အီလက်ထရွန်နစ် လုပ်ငန်းစဉ်များ တပ်ဆင်ရေး ပထမနေ့ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဝန်ကြီး ဌာနအသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များအကြား ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာ စကားလုံး (မြန်မာယူနီကုတ်၊ ဇော်ဂျီစာလုံး) ပြဿနာသည် စိတ်ဝင်တစား ဆွေးနွေးဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာအဖြစ် ဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ကြောင်း ယင်းအစည်းအဝေး တက်ရောက်လျက်ရှိသူ The Voice Weekly သတင်းထောက်က ပထမနေ့ ဆွေးနွေးပွဲအပြီး နေပြည်တော်မှ သတင်းပေးပို့ကြောင်း၊
အင်တာနက်ပေါ်ရှိ အွန်လိုင်း စာမျက်နှာများသာမက iPhone၊ iPad စသည့် ယနေ့ခေတ် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများတွင် ၂၀၀၆ ခုနှစ်ခန့်က စတင် ပေါ်ထွက်လာသည့် ဇော်ဂျီစာလုံးသည် အသုံးများ တွင်ကျယ်လျက် ရှိကြောင်း၊ ယင်းစာလုံးဖြင့် အိတ်ဆောင် ပိဋကတ်သုံးပုံကိုပါ ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ဇော်ဂျီစာလုံးကို တီထွင်သူ Alpha Group မှ ဦးရဲမြတ်သူက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရုံးသုံးအဖြစ် အသုံးပြုရန် သတ်မှတ်သည့် မြန်မာယူနီကုတ် စာလုံးကို အင်တာနက်အသုံးပြုသူ မြန်မာများအကြား ယခုထက် ပိုမိုတွင်ကျယ်အောင် ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း အကြံပေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း၊ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ တပ်မတော် အရာရှိ တစ်ဦးနှင့် အခြားအစိုးရ အရာရှိတစ်ဦးက ကို တစ်နိုင်ငံလုံး စံအဖြစ် အသုံးပြုရေးအတွက် အစိုးရက အမိန့်အာဏာသုံး၍ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် e-Government (အီလထရွန် အစိုးရလုပ်ငန်းစဉ်) ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ၂၀၀၃ ခုနှစ်ခန့်က စတင်အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ပြီး ရှစ်နှစ်ကျော်ခန့်အကြာ အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် အရှိန်အဟုန် မြှင့်တင်ရေး စတင် ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိ e-Government အခြေအနေသည် လွန်ခဲ့သော ခုနစ်နှစ်ကျော်က အခြေအနေနှင့် များစွာ ကွာခြားခြင်း မရှိဘဲ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမှ ထုတ်ပြန်သည့် အီလက်ထရွန်နစ် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ အသင့်ရှိမှု အခြေအနေ တွင် ဒသမ ဂဏန်း မဆိုစလောက်သာ ပြောင်းလဲမှုရှိပြီး ဒေသတွင်းတွင် အဆင့် ခုနစ်နေရာအထိ ကျဆင်းလာခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ပင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ရုံးတွင်းသတင်း အချက်အလက်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ ရိုက်နှိပ်သုံးစွဲရာတွင် မြန်မာယူနီကုတ် စကားလုံးကို စံအဖြစ် တရားဝင်သတ်မှတ် ထားခဲ့သော်လည်း သုံးစွဲမှု အဆင်ပြေ လွယ်ကူသည့် ဇော်ဂျီစာလုံးကို မစွန့် နိုင်ဘဲ ရှိကြရာ ယနေ့အထိ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း အိုင်တီ လောကသားများနှင့် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ပုံမှန် အလုပ်လုပ်နေကြသူ အများစု၏ အဆိုအရ သိရကြောင်း သတင်းကို The Voice Weekly သတင်းဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသက် ၆၀ နှစ်အထက် သက်ကြီးရွယ်အို ခန့်မှန်းအရေအတွက် ငါးသန်းကျော် ရှိနေ၊ သက်ကြီးရွယ်အို များအတွက် သင့်တော်သည့် အလုပ်အကိုင် နှင့် ၀င်ငွေဖန်တီးနိုင်မှု အရေးပါလာ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသက် ၆၀ နှင့်အထက် သက်ကြီးရွယ်အိုခန့်မှန်း အရေအတွက်မှာ ငါးသန်းကျော် ရှိ နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် သင့်တော်သည့် အလုပ်အကိုင်နှင့် ၀င်ငွေ ဖန်တီးပေးနိုင်ရေးမှာလည်း သက်ကြီးရွယ်အိုများ ရရှိခံစားနိုင်သည့် အခြေခံ အခွင့်အရေးများတွင် ပါဝင်နေပြီး တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့်ရရှိအောင် ဖော်ဆောင်ပေးရမည့် လိုအပ်ချက်တစ်ရပ် ဖြစ်သည်ဟု နေပြည်တော်တွင် ပြီးခဲ့သည့် မေလကုန်ပိုင်း က ကျင်းပခဲ့သည့် အာဆီယံ-ကိုရီးယား အိမ်တိုင်ရာရောက် သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အတွေ့အကြုံ ဖလှယ်ခြင်း ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှ ဆွေးနွေး ချက်များအရ သိရကြောင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ ရရှိခံစားအပ်သည့် အခြေခံအခွင့်အရေးများတွင် စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေး အပြင် သင့်တော်သည့်အလုပ်အကိုင် နှင့် ၀င်ငွေရရှိရေး၊ လူမှုဖူလုံရေး၊ သိလိုတတ်လိုသည့် ပညာရပ်များအား ဆက်လက် လေ့လာဆည်းပူးခွင့် ရရှိရေး၊ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်များနှင့် အမှီအခိုကင်းရေး စသည့်အချက်များ အနက် သင့်တော်သည့် အလုပ်အကိုင် နှင့် ၀င်ငွေရရှိရေးသည် ပဓာနအကျဆုံးဖြစ်ကြောင်း လေ့လာသူတစ်ဦး က ဆိုပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသည် လက်ရှိကာလတွင် သက်ကြီးရွယ်အို အလွန်အမင်း များပြားခြင်း ပြဿနာကို ရင်ဆိုင်ရခြင်း မရှိသေးသော်လည်း မကြာတော့သည့် ကာလတွင် ရင်ဆိုင်လာရဖွယ်ရှိသဖြင့် အနာဂတ်သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းကို သမားရိုးကျ ဘိုးဘွားရိပ်သာ ထူထောင်စောင့် ရှောက်မှုစနစ်သည် လုံလောက်မှု မရှိနိုင်တော့သဖြင့် အခြားနည်းစနစ်များ ကိုလည်း စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်သွား မည်ဟုလည်း လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း မြန်မာ့လူဦးရေသည် ၅၉ ဒသ မ ၃ သန်းသို့ရောက်ရှိနေပြီး မြန်မာ့သက်ကြီးရွယ်အို ဦးရေမှာ ၅ ဒသမ ၂၃ သန်းသို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ရာ အချိုးချကြည့်ပါက ၁း၁၁ ဖြစ်နေ ပြီး ယင်းတွင် ခိုကိုးရာမဲ့ဦးရေမှာ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ငါးသိန်းကျော်ရှိနိုင် မည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံတွင် သက်ကြီး ရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း များကို ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်နေကြသည့် အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများက ကောက်ယူ ထားသော စာရင်းများက ဆိုကြောင်း၊ မြန်မာ့သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်သည့် နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများစာရင်း၊ မြန်မာ့သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်အချို့၊ မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံတကာနှင့် ပူးတွဲဆောင်ရွက်နေသည့် သက်ကြီးရွယ်အိုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပြောစကားများကို ဖော်ပြထားသည့် သတင်းကို Eleven Media Group သတင်းဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
အိမ်ခြံမြေ ရောင်း ၀ယ်ခွန်လျှော့ချပေးထားမှု သက်တမ်း ကုန်ဆုံးတော့မည်၊ ငွေကြေးစီးဆင်းမှု ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတို့ကို ထိခိုက်သည်အထိ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် မလိုအပ်ဘဲ ကြီးထွားလာနေမှုကြောင့် အခွန်လျှော့ချပေးခြင်းကို သက်တမ်းမတိုးသင့်တော့ဟု လုပ်ငန်းရှင်များ သုံးသပ်
အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ရာတွင် ကျပ်သန်း ၅၀၀၀ နှင့်အထက်ဆိုပါ က အခွန် ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျပ်သန်း ၅၀၀၀ အောက်ဆိုပါက အခွန် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းသာ ပေးဆောင်ရန်လျှော့ချ ပေးထားမှုမှာ လာမည့်သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ထားသော အဆိုပါလျှော့ချထားသည့် အခွန်နှုန်းဖြင့် ပေးဆောင်ရန် သတ်မှတ်ထားမှုမှာ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် သက်တမ်းတစ်ကြိမ် ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီးနောက် တစ်နှစ်ထပ်မံ သက်တမ်းတိုးထားခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ တွင် ထပ်မံသက်တမ်းတိုးထားသည့် ကာလကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် ထိုသို့လျှော့ချပေးထားမှုကြောင့် အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ကို ကစားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ ပေါ်ထွက်လာပြီး မလိုအပ်ဘဲ အိမ်ခြံမြေ ဈေးများ ထိုးတက်လာခဲ့ရာ အခြားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၊ ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းများအပြင် ငွေကြေးစီးဆင်းမှု အပေါ်တွင်ပါ သက်ရောက်မှုရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းများတွင် အရင်းအနှီးများ ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်ရေးအတွက် အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ်ခွန်ဆိုင်ရာ အခွန်နှုန်း လျှော့ချပေးထားမှုအား ထပ်မံသက် တမ်းတိုးခြင်းမပြုသင့်ကြောင်း ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းရှင်များက သုံးသပ် ခဲ့ကြကြောင်း စသည့် သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်မှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ စကားများ၊ စီပွားရေးသမားများစကားကို ဖော်ပြထားသည့် သတင်းကို Eleven Media Group သတင်းဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
နိုင်ငံခြားသားများအား တရားမ၀င် လက်ခံထားသော ကုမ္ပဏီများကိုအရေးယူ၊ ရွှေတူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီသုံးခုတွင် တရုတ်နိုင်ငံသားအချို့အား တွေ့ရှိခဲ့သောကြောင့် ကုမ္ပဏီကို ဖျက်သိမ်း
နိုင်ငံခြားသားများအား တရားမ၀င် လက်ခံထားသော ကုမ္ပဏီများ ကို အရေးယူခဲ့ပြီး အဆိုပါ ကုမ္ပဏီများအနက် ရွှေတူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီသုံးခုတွင် တရုတ်နိုင်ငံသား အချို့အား တွေ့ရှိခဲ့သောကြောင့် ကုမ္ပဏီကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိကြောင်း၊ ရွှေတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီသုံးခု မှာ တော်ဝင်စံထား၊ မေတ္တာရှင်နှင့် ရတနာလယ်မြေ ကုမ္ပဏီတို့ဖြစ်ပြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင် ခရိုင်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ခရိုင် လ၀ကမှူးတို့ ပူးပေါင်းအဖွဲ့က အဆိုပါကုမ္ပဏီများကို ၀င်ရောက်စစ်ဆေးရာ တရုတ်နိုင်ငံသား ခြောက်ဦး တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း၊ ယင်းသို့ တွေ့ရှိခဲ့သည့် အတွက် ယင်းကုမ္ပဏီ သုံးခုကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီသုံးခုနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် ၁၃ ဦး တို့အား အမည်ပျက်စာရင်းထည့်သွင်း သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀န်ကြီးဌာန၀န်ကြီးရုံး၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၂/၂၀၁၁ အရ သိရကြောင်း၊ ထို့အတူ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် သက်တမ်း မရှိသည့်အပြင် ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ လာရောက်လုပ်ကိုင် နေထိုင်သူ နိုင်ငံခြားသားများအား တရားမ၀င်လက်ခံထားသော Meridian International Services Ltd ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သိရကြောင်း သတင်းကို Eleven Media Group သတင်းဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းတော်ကြီး နစ်မြုပ်ရာနေရာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိထားပြီး နည်းပညာလိုအပ်ချက် ရှိနေ၍ ဆယ်ယူပေးရန် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ ကမ်းလှမ်းမှုပြုထား
မြစ်အတွင်း နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ၀န်းကျင် နစ်မြုပ်နေသည့် ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းတော်ကြီး နစ်မြုပ်ရာ နေရာအား ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသော်လည်း နည်းပညာ လိုအပ်ချက်ကြောင့် ဆယ်ယူမှု မပြုနိုင်သေး၍ နည်းပညာ အသုံးပြုဆယ်ယူပေးရန် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ ကမ်းလှမ်းထားကြောင်း Global9Education Centre မှသတင်း ရရှိကြောင်း၊ ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းတော် ရှာဖွေမှုကို လွန်ခဲ့သောနှစ်များကပင် ဘူမိဗေဒပညာရှင်များ ပူးပေါင်းရှာ ဖွေခဲ့ရာ နစ်မြုပ်ရာ နေရာအားရှာဖွေ တွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်း နောက်၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် သြစတြေး လျမှ ပညာရှင်များ လာရောက်ကာ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းတော်ရှာဖွေ မှုအားလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းတော် ရှိရာနေရာကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဓမ္မစေတီခေါင်း လောင်းတော်အား လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် နည်းအတိုင်း ဆယ်ယူပါက ပျက်စီးကြေမွနိုင်သည်ဟု ပညာရှင်များက တွက်ဆနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ဆယ်ယူ မှုမပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရကြောင်း၊ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းတော် ကြီး၏ အ၀အကျယ်မှာ ၁၀ပေရှိပြီး အရှည်မှာ ၁၂ ပေရှိကြောင်း သိရ သည်။ အဆိုပါ ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းတော်ကြီးသည် ငဇင်ကာမင်း လက်ထက်က သန်လျင်ဘက်သို့သင်္ဘောဖြင့် သယ်ယူရာ၌ ပဲခူးမြစ်နှင့် ပုဇွန်တောင်မြစ်ဆုံရာ အကွေ့နေရာ တွင် သင်္ဘောနှစ်စီးတိုက်မိရာမှ ရန် ကုန်မြစ်ထဲသို့ ပြုတ်ကျနစ်မြုပ်သွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရကြောင်း၊ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကို အင်္ဂလန် က လာဖော်ပေးမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းထားတာ ရှိပါကြောင်း အင်္ဂလန်က ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်းတုန်းက သူတို့ပစ္စည်းတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြုပ်ထားတာ ရှိကြောင်း အဲဒါကို သူတို့ က လာဖော်ချင်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကခွင့်ပြုပေးရင် သူတို့က ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကို အကောင်းအတိုင်း ဆယ်ယူပေးမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းထားကြောင်း၊ သူတို့ ပစ္စည်းကိုဖော်ပြီးရင်ပစ္စည်းကို ဆယ်ပုံပုံပြီးနှစ်ပုံကို မြန်မာကိုပေးမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ပစ္စည်းရှစ်ပုံကိုတော့ ပြတိုက်နဲ့ ဟိုတယ်တွေကို ရောင်းချပြီး ရန်ပုံငွေရှာမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကို Eleven Media Group သတင်းဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
အစားအသောက်အချို့တွင် ဘေးဥပဒ်ဖြစ်ဖွယ် ပစ္စည်းများ ပါဝင်လာခြင်းကြောင့် စားသုံးသူအချို့ စိုးရိမ်
အစားအသောက်အချို့တွင် ဘေးဥပဒ်ဖြစ်စေတတ်သော ပစ္စည်းများ ပါဝင်လာခြင်းကြောင့် စားသုံးသူ အချို့မှာ စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ကြရကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရကြောင်း၊ အချို့စားသောက်ဆိုင်များမှာ သောက်ရေ၊သုံးရေ အခက်အခဲကြောင့် သောက်ရေ၊ သုံးရေသန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ရှိနေကြောင်း သိရကြောင်း၊ ထို့ပြင် ပေါင်မုန့်၊ ကိတ်မုန့် စသည့် အဆင်သင့်စားသုံးနိုင်သော သရေစာမုန့်အချို့မှာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် မပါရှိခြင်းကြောင့် ၀ယ်ယူ စားသုံးသူများအနေဖြင့် အခက်တွေ့ ရကြောင်း စားသုံးသူများအနေဖြင့် မိမိဝယ်စားမည့် အစားအသောက်တစ်ခု၏ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်မှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်မှု၊ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးရက်မှန်ကန်မှုများအပေါ် စိတ်ချ ယုံကြည်ရန် လိုအပ်မှုများရှိနေကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရကြောင်းသတင်းကို ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသူများ ပြောကြားထားသောစကားများပါ ဖော်ပြထားသည့် သတင်းကို Eleven Media Group သတင်းဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဗဟန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)တွင် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်လောင်းဦးရဲအောင်က ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ)မှ ဒေါက်တာညို ညိုသင်းသည် ခိုင်လုံသည့်ဆန္ဒမဲ အများဆုံးရရှိပြီး တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေး ကောက် တင်မြှောက်ခံခဲ့ရ ခြင်းကို ကျေနပ်ခြင်းမရှိ၍ ကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း၊ တရားစွဲဆိုခြင်းကို ခံရသော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာညိုညိုသင်းသည် ၎င်းစွပ်စွဲခံရ သောအမှုတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း ၊ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့(၆)က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဗဟန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) တွင် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဒေါက်တာညိုညိုသင်းအား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းသည် တရားဝင်ဖြစ်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး တရားစရိတ်ငွေကျပ်ငါးသိန်းကို လျှောက်ထားသူ ဦးရဲအောင်က လျှောက်ထားခံရသူ ဒေါက်တာညိုညိုသင်း အားပေးစေဟု အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းကို Eleven Media Group သတင်းဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ဟိုတလောကပဲ ဓမ္မစေတီမင်း ခေါင်းလောင်းတော်ကြီး အကြောင်း MG မှာဆွေးနွေးကြတာ ခုပြန်ပြီးပေါ်လာပြီ ။
“ဆယ်ပုံပုံပြီးနှစ်ပုံကို မြန်မာကိုပေးမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ပစ္စည်းရှစ်ပုံကိုတော့ ပြတိုက်နဲ့ ဟိုတယ်တွေကို ရောင်းချပြီး ရန်ပုံငွေရှာမည်ဖြစ်ကြောင်း ” ဆိုတာကတော့တမျိူးကြီးနော . အသေးစိတ်ကတော့ တကယ်မှပဲ သိရမှာနဲ့တူတယ်။
မြန်မာ စစ်အစိုးရ နှင့် ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြသော ကရင်သူပုန်များ သည်။ ယနေ့ အချိန်တွင် ရွှေဂူ နယ်အထိ အောင်မြင်စွာ ထိုးစစ်ဆင်နိုင်လာခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာ စစ်အစိုးရ အနေဖြင့် အဘက်ဘက်တွင် စစ်၈ှုံးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို သိနိုင်ပါသည်။ မန္တလေးမြို့ နှင့် အခြားမြို့ ကြီးများတွင် ည (၈) နာရီကျော်လျှင် တရားဝင်ပေါ်တာ ဆွဲခြင်း ပြုလုပ်နေကြောင်းကိုလည်း သိရပါသည်။ နေ့ ခင်းပိုင်းတွင်လည်း တရားမ၀င် အနေဖြင့် တို့ ဆေးများ တို့ ပြီး အဓမ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းများပြုလုပ်လျှက်ရှိနေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ထို့ ကြောင့် ဒီမေးလ်ရသူသည် ဖြစ်နိုင်သမျှ ဖြန့် ဝေပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ ဒီမေးလ်ရသူသည် မိန်းကလေးဖြစ်နေပါကလည်း မိမိ တို့ ၏ မောင်၊ အစ်ကို၊ ရည်းစားများ၊ လုံခြုံမှုရှိစေရန် အထူး(အထူး) ဂရုစိုက်သင့်ပါသည်။
အဲဒီစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ facebook note မှ စာလေးအားကူးယူတင်ပြပါသည်။
ဒီသတင်းစကား ဘယ်သူ့ထံမှ စတင်ထွက်ပေါ်လာသလဲလို့တော့ အရင်းအမြစ်ကို ကျွန်တော်မသိပါ။ သိချင်ဖို့လည်း စိတ်မ၀င်စားပါ။ သို့သော် မန္တလေးမြို့နေလူငယ်၊ လူရွယ်များ အထိတ်တလန့် သို့လော..သို့လော ဖြစ်ပေါ်စေမည့် ကောလဟာလသတင်းဖြစ်နေသည့်အတွက် နည်းနည်းတော့ ဖြေရှင်းဖို့သင့်တယ်လို့ မန္တလေးမြို့နေ လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ယူဆလို့ဒီစာလေးကိုရေးဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့တော်ကြီးတွင်နေထိုင်နေသော ကျွန်တော်ဒီမေးလ်ကို လက်ခံရရှိတော့ တော်တော်ရယ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဟာသတစ်ပုဒ်လိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာလို့လဲတော့ မမေးပါနဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မန္တလေးမြို့မှာနေပြီး ညဆိုလျှောက်လျှောက်သွားတတ်တဲ့အကျင့်ရှိလို့ပါ။ ညအွန်လိုင်းတက်လို့ပျင်းရင် လက်ဖက်ရည်ထွက်သောက်တယ်။ မန္တလေးမှာ မိုးလင်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေများကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တိုးတက်နေတဲ့အိုင်တီခေတ်ကြီးမှာ နေထိုင်နေကြတဲ့ ခေတ်ပညာတတ်လူတွေတိုင်း ပြောတိုင်းမယုံသင့်ကြတော့ပါဘူး။ ဆက်သွယ်ရေးတွေ အရမ်းကောင်းမွန်နေတဲ့ခေတ်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့မှာ ကိစ္စတစ်ခု၊ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို လက်သင့်ခံနိုင်/မခံနိုင်ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်တွေ၊ စဉ်းစားချင့်ချိန်တတ်တဲ့ဥာဏ်တွေနဲ့ လူတိုင်းပြည့်စုံနေကြပါပြီ။
အထက်ပါမေးလ်ကိစ္စကို သင်သေချာဖတ်ရှုပြီး ဖြစ်နိုင်/မဖြစ်နိုင် စဉ်းစားချင့်ချိန်ကြည့်ပါ။ မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမှာ နေ့ခင်းကြောင်တောင် ပေါ်တာဆွဲတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ တို့ဆေးဆိုတာတော့ ကျွန်တော့်တစ်သက်ကြားပဲကြားဖူးခဲ့တယ်။ မမြင်ဖူးဘူး။ ဥပမာ- မေ့ဆေးကိုလက်ကိုင်ပုဝါဆွတ်ပြီး နှာခေါင်းပိတ်ရင်တော့ မပြောတတ်ဘူးပေါ့လေနော…း) ထားလိုက်ပါတော့တို့ဆေးကိစ္စ၊ ညဘက် ၈ နာရီကျော်ပေါ်တာဆွဲတယ်ဆိုတော့ မန္တလေးမြို့ကြီးတော့ သုဿာန်တစ်စပြင်လို ဖြစ်နေတော့မှာပဲ.. အဲဒီမေးလ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်း ဒီမေးလ်ရသူသည် မိန်းကလေးဖြစ်နေပါကလည်း မိမိ တို့ ၏ မောင်၊ အစ်ကို၊ ရည်းစားများ၊ လုံခြုံမှုရှိစေရန် အထူး(အထူး) ဂ၈ုစိုက်သင့်ပါသည်။ ဆိုတဲ့စကားကို ပညာတတ် အတွေးအခေါ်တွေအများကြီးရှိတဲ့ မိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်ပါ။ မိတ်ဆွေတို့လို မိကောင်းဖခင်သားသမီး၊ ပညာတတ်လူတန်းစားတစ်ယောက်ကို ကြက်ကလေး၊ ငှက်ကလေးဖမ်းသလို ပေါ်တာဆွဲလို့ရပါ့မလား။ မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်း ပေါ်တာဆွဲမှာကို ကြောက်နေသင့်ပါသလား။ ပေါ်တာလာဆွဲတဲ့သူတောင် ကိုယ့်ရှုးကိုယ်ပြန်ပတ်သွားပါဦးမယ်။ ပညာတတ်မိကောင်းဖခင်သားသမီးကို ပေါ်တာလာဆွဲမည့်သူတွေ DVB တို့ RFA တို့မှာတောင် ခေါင်းကြီးပိုင်းအစီအစဉ်မှာပါသွားပါဦးမယ်။ ဘယ်အရာမဆို၊ ဘယ်ကိစ္စမဆို မိမိကိုယ်ပိုင်အသိဥာဏ်နဲ့ စဉ်းစားချင့်ချိန်တွေးခေါ်ပြီးမှ ယုံကြပါလို့ အသိပေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က ပုံပြင်တွေ၊ ကျောင်းစာတွေမှာ သင်ခဲ့ဖူး၊ ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မစူးစမ်းမဆင်ခြင်တဲ့ယုန်သူငယ်လိုဖြစ်မျိုး ဒီနေ့လိုခေတ်ကြီးမှာ မဖြစ်သင့်၊ မရှိသင့်တော့ပါဘူး။ ကောလဟာလတွေကို သေချာစဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးမှ ယုံကြပါလို့ မန္တလေးမြို့နေ ညီအကိုမောင်နှမ သူငယ်ချင်းအားလုံးကို အသိပေးအပ်၊ အကြံဥာဏ်ပေးအပ်ပါတယ်။ ဆရာကြီးလုပ်တယ်လို့တော့ မထင်ကြစေချင်ပါဘူး။ တစ်မြို့တည်းအတူနေ ညီအကိုမောင်နှမ သူငယ်ချင်းတွေ အထိတ်တလန့်ဖြစ်နေတာကို မလိုလားသူတစ်ဦးအနေနဲ့ စေတနာနဲ့ရေးတာလို့ပဲ မြင်ကြစေချင်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသတင်းကွန်ယက်ကို ၁၉.၀၆.၂၀၁၁ နေ့မှာလွန့်တင်ခဲ့ပါတယ်။http://www.burmese.assknetwork.org မှာသွားရောက်ကြည့်ရူနိုင်ပါတယ်။
ကိုဇော်မင်းရေ.. အဲ့ဒီဆိုပ်က မြန်မာစာကို ဖတ်လို့မရဘူးဗျာ။ သူပေးထားတဲ့ဧရာဖေါင့်ကို တပ်ဆင်ပြီးတော့လဲဖတ်လို့မရဖြစ်နေတယ်။ ဘာကြောင့်လဲမသိဘူး။ သိရင်ကူညီပါအုံး။
Mandalay news 23.6.2011 ။ ။ ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီခန့် အချိန်တွင် ၇၈ လမ်း ၃၀x၃၁ လမ်းကြား ဘူတာကြီး နှင့် မျက်စောင်းထိုး ၊ ပစိဖိတ် ဟိုတယ် ဘေး ကပ်ရပ် ရှိ Banner store + Sky lions company အဆောက်အဦး တွင် ရဲများ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးခဲ့သည် ဟု သိရှိရသည် ။ စစ်ဆေးသည် မှာ တတိယ ထပ် sky lions company ၏ အရောင်းကောင်တာ ၊ ငွေစာရင်း ဌာန များသို့ ရုတ်တရက် ဝင်ရောက် လာခဲ့သည် ဟု သိရှိရသည် ။ ရဲများ စတင် ဝင်ရောက်လာသည် နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ထို sky lions မှ ဝန်ထမ်းများ ကို အကျယ်ချုပ် သဘော မျိုးနှင့် မေးမြန်း လျှက် ရှိကြောင်း ။ ဖုန်း လိုင်းများ အားလုံး ကို ဖြတ်တောက်လိုက်ကြောင်း network ပါ ဖြတ်တောက်လိုက်ကြောင်း ။ အောက်ထပ် မှ အဆိုပါ တတိယ ထပ် သို့ တက်ရောက် ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူကြမည့် ဈေးဝယ်များကို လည်း အောက်မှ အပေါ်သို့ ပေးမတက်ကြောင်း ၊ အပေါ်မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် ရှိနေပြီးသော ဈေးဝယ်များ ကို လည်းပေးမဆင်းကြောင်း ။ သိရသည် ။ အဆိုပါ အကြောင်းအရာ နှင့် ပတ်သက် ပြီး အသေးစိတ် ကို သိရှိရပြီး ပါ က ထပ်မံ တင်ပေးပါမည် ။
မေးလ်ကနေရလို့ ဖြန့်ဝေတာပါ… ။ စာရေးသူက ဦးကိုကိုဌေးလို့ ရေးထားပေမဲ့… နာမည်အမှန်ကတော့ ဦးကိုကိုထွေးပါနော် ။
စပါယ်ရှယ်ရိုက် ကြော်ညာကောင်းကောင်းနဲ့ အခုဆိုင်ရှင်တွေဆီ က
ဒီ အထိဆိုင်ရှင်တွေ က မေ့ထားနိုင်ပါတယ်။
နှစ်ရှည်မခံလောက်ဘူးလို့ အားလုံးက ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။
အိမ်ဖုန်းတွေကိုရွေးပြီးနောက်တဖွဲ့ က ထပ်ဆက်ပါတယ်။
၁၆ ရက်ဇွန်လ ၂၀၁၁ ကပါ။
၁၈ ဇွန်လ၂၀၁၁ မှာမှ ငွေလာမသွင်းရင်
နောက်တပတ် မှာ ဒါဏ်ငွေကောက်မှာမို့
၃၅၀၀၀ သမားသည် ၇၀၀၀၀၊
၄၅၀၀၀ သမားသည် ၉၀၀၀၀ လို့ဆိုပါတယ်။
တချို့ကလဲပြောနေပါတယ်။နောက်ဆုံး သတင်းကို အခုထွသေချာမသိရသေးပေမယ့် ဒီ ၂ပတ်အတွင်း
သူတို့က အခံစားရဆုံးလူတွေ ကိုး။
ရာသီဥတုလေးပူတယ်လူတွေ က အားနေတယ်ဆို
အိမ်မှာမနေလဲ ရှော့ ပင်စင်တာလေးလျှောက်ကြည့်
(တကယ်လဲ မြန်မာတွေ အပို မဖြုန်းနိုင်တော့တဲ့ ဘ၀ပါ)
ဒီလောက်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေ တပြားမှ မထွက်ဘဲ
သဲ့ယူတတ်တဲ့ သူဌေးက ဒီစင်တာဖွင့်ပွဲမှာ
ပင်ပမ်းရတဲ့ ဘ၀အပမ်းတွေ ကြားမှာရယ်စရာတွေ
ရှာပြောနေပေမယ့် တကယ်တော့ တော်ဝင်က ဘယ်ဆိုင်ရှင်မှ
ကိုကိုထွေးနဲ့ကျနော်နဲ့ကသူငယ်ချင်ဗျ … မေးကြည့်ရအုံးမယ်။
24.6.2011 သောကြာနေ့ နံနက် ၁၁း၃၀ ကျော်ကျော် ခန့် တွင် မန်းတလေးမြို့ ၈၄လမ်း၊ ၂၈ လမ်း ထောင့် ဝိန့် စိန် ရွှေဆိုင်ရှေ့ရပ်နားထားသော ဂျစ်ကား တစ်စီး ပေါက်ကွဲ သွားခဲ့ရာ အင်ဂျင် နှင့် ဖရိန် သာ ကျန်ရှိကြောင်း သိရသည် ။ ရပ်ထားသော ဂျစ်ကား ကို ချိန်ကိုက်ဗုံး ကပ်သွားပြီး စနစ်တကျ ခွဲခြင်း ဖြစ်သည် ဟု အဆိုပါ ရပ်ကွက် တာဝန်ခံ များ က ယူဆကြသည် ။ မည်သူ တစ်ဦးမှ သေဆုံး ၊ ဒဏ်ရာအနာတရ မရရှိကြောင်း သိရသည် ။
BURMA RELATED NEWS – JUNE 24, 2011
AP – Bombs explode in3Myanmar cities, wounding 2
AFP – Myanmar’s beautiful game loses its lustre
UPI – Myanmar politician warns of Arab spring
Al Jazeera – Military playsacivilian-looking game
BigPond News – Rudd to meet Aung San Suu Kyi
Brisbane Times – Suu Kyi to press Rudd on Burma inquiry
Toronto Star – Burma’s ‘lady’ is free, but her country still in chains
IRIN – In Brief: UNODC warning on opium cultivation in Myanmar
Straits Times – Myanmar drug production booms: UN
Straits Times – Japan envoy to meet Suu Kyi, Myanmar government
The Japan Times – Senior official to meet Suu Kyi, urge democracy
The Hindu – Editorial: Drop the pretence on Myanmar
Bernama – Asean-Russia Senior Officials Meeting Held In Myanmar Capital
ABC Radio Australia – Kachin Burmese protest in Canberra
Aliran Online – Shan refugees in Malaysia (Part 1)
Aliran Online – Shan refugees in Malaysia (Part 2)
Aliran Online – Shan refugees in Malaysia (Part 3)
The Buffalo News – Refugees find high risks on Squaw Island
IBNLive – Krishna wraps up Myanmar visit; President Sein to visit India
ITJ – Double-track-line-Construction China-Myanmar started
The Irrawaddy – Moscow’s Nuclear Envoy Visits Burma
The Irrawaddy – Kachin Conflict Intertwined with Chinese Interests
The Irrawaddy – US Lawmakers Differ on Approach to Burma
Mizzima News – A second bomb goes off in Mandalay–fourth bomb on Friday
Mizzima News – Burma photographs win international award
Mizzima News – USDP members directly appointed as Burmese village administrators
DVB News – Migrants killed in Thai road accident
စားကြဦးမလား ဂျပန်ပဲပုတ်ခြောက်ကျော် ..အဲလေ…မစင်အသားတု တဲ့ ခင်ဗျာ…
ကမ္ဘာ့ စားနပ်ရိက္ခာရှားပါးမှုဟာ အရေးတစ်ကြီးဖြေရှင်းဖို့ လိုအပ်တဲ့ ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်လာနေပါတယ်…
သို့ သော်လည်း ပါမောက္ခ အီကီဒါ ကတော့ ၎င်းရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ကြံဆတီထွင်မှုဖြစ်သည့် လူ့ မစင်မှနေ
ပရိုတိန်းဓါတ်ပါသည့် အသားတုတစ်မျိူးတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုဟာ ထိုအခက်အခဲပြဿနာကြီးကို အရေးပါ
သည့် နေရာမှ ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့ ယူဆနေခဲ့ ပါတယ်…
အိုကာယာမ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခန်းမှ ဂျပန်နိုင်ငံသား သုတေသနပညာရှင်က ၎င်း၏တိုင်းပြည်တွင် မိလ္လာပြဿ
နာများ မနိုင်မနင်းဖြစ်နေခဲ့ သဖြင့် တိုကျိူ မိလ္လာဌာနအနေဖြင့် ထိုအခက်အခဲကိုအကျိူးရှိစွာဖြေရှင်းနိုင်ရန် နည်းလမ်းရှာဖို့ ၎င်းအား ပန်ကြားပြောဆိုခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်…
ဂျပန်နိုင်ငံမှ သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ ကြောင်တောင်တောင်နိုင်လှမှုဟာ လူသိများတာကြောင့် ယခုလို ရွံရှာဖွယ်
မစင်မှ အစားအသောက်အဖြစ်ထုတ်လုပ်မည် ဟူသောစိတ်ကူးကြံဆ တီထွင်ချက်ဟာ သိပ်တော့ အထူးအ
၎င်းရဲ့ သုတေသနပြုမှုကာလအတွင်းမှာ ပညာရှင်အီကီဒါ ဟာ မိလ္လာအညစ်အကြေးအဖတ်များတွင် ပရိုတိန်း
ဓါတ်များ အမြောက်အများပါဝင်နေသည်ကိုတွေ့ ရှိရလို့ ထိုတန်ဖိုးရှိ ပရိုတိန်းများအား စစ်ယူပြီး အသားတု
တစ်မျိူးအဖြစ် ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ တီထွင်ဖန်တီးခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်…
လူ့ မစင်များ အဓိကပါဝင်သည့် မိလ္လာအညစ်အကြေးများတွင် ဘက်တီးရီးယားများအပြည့် ရှိနေတာကြောင့် 
ပရိုတိန်းဓါတ်များ ရာနှုံးမြင့် ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်…
ပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှု ဖြစ်စဉ်အတွင်း အပူရှိန်ကြောင့် သေဆုံးကုန်မှာမို့ ထိုဘက်တီးရီးယားများဟာ အန္တရယ်
အစဦးစမ်းသပ်လေ့ လာချက်များအရ အသားတုဟာ ထပ်မံပေါင်းစပ်လိုက်သည့် ပဲပိစပ်ပရိုတိန်းကြောင့် အ
မဲသား နှင့် အတူတူပင် အရသာရှိနေပြီး အီကီဒါက ပိုမိုနီးစပ်သွားစေရန် အနီရောင် အစားအစာစပ်ဆေးကို
ပင် ထပ်မံထည့် သွင်းလိုက်ပါသေးတယ်…
ထိုလူ့ မစင် တစ်ဖြစ်လည်း အသားတုတွင် ပါဝင်သည့် အဟာရဓါတ်များကား ပရိုတိန်းဓါတ် ၆၃ ရာခိုင်နှုံး၊
ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် ၂၅ ရာခိုင်နှုံး၊ လီပဒ် ၃ ရာခိုင်နှုံး နှင့် သဘာဝဓါတ် ၉ ရာခိုင်နှုံးတို့ ပါဝင်တာကြောင့် ထို
အသားအစားထိုးပစ္စည်းဟာ မဆိုးဘူးလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်…
သို့ သော်လည်း ဤအသားတုဟာ မိလ္လာအညစ်အကြေးမှသန့် စင်ထုတ်ယူစီမံတာဖြစ်ပြီး လူ့ မစင်မှ ပရိုတိန်း
ဓါတ်များပါဝင်တယ်ဆိုတာ သိလျှင်ဖြင့် စားသုံမည့် သူအနည်းငယ်သာရှိလိမ့် မည်ဟု ပါမောက္ခ အီကီဒါ က
ဒါပေမယ့် အစားအစားရှားပါးပြတ်လပ်မှု အပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ လျှင်တော့ လူတွေဟာ ထိုအသားတုကို
ပင် အလုအယက်တောင်းဆိုကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
ယခုလောလောဆယ်အားဖြင့် အီကီဒါဟာ ၎င်းရဲ့ တီထွင်မှုကို လူအများတတ်နိုင်သည့် ဈေးနှုံးဖြင့် အမြောက်
အများ ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့် နေပါတယ်…
လက်ရှိအနေအထားမှာတော့ ” မစင်အသား ” ဟာ သာမန်အသားထက် ၁၀ ဆ မျှပိုမိုဈေးကြီးနေပေမယ့် 
သုတေသနပြုမှုအတွက် ကုန်ကျစားရိတ်ကို ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစားရိတ်ထဲမှ ဖယ်နိုင်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက်
ထိုအသားတုဈေးနှုံးဟာ သဘာဝအသားဈေးနှုံးနှင့် ယှဉ်ပြိုင် ( လျော့ နည်း ) နိုင်လိမ့် မည်ဟု ဂျပန်သိပ္ပံပ
ညာရှင်က မျှော်လင့် နေပါတယ်…
ငတ်လာယင်တော့ လည်း စားကြရမှာပါပဲ…
ဈေးသက်သာတယ် ဆိုယင်တော့ ကြက်စာ ၀က်စာ အဖြစ်ရောင်းယင် ရနိုင်ပါတယ်။ ပရိုတိန်း ရီဆိုင်ကယ် မှာ
ဒီသတ္တ၀ါ တွေ လူ့မစင်ကို ပလိန်းအတိုင်း စားနေတာ ပါဘဲ။ အဲဒီ သတ္တ၀ါတွေအသား လူကပြန်စားနေတာဘဲလေ။
လူတွေ နွားတွေ မစင်နဲ့ မြက်ပင်တွေရှင်သန် ကြီးထွားတယ်။ မြက်ကို နွားက စားတယ်။နွားသားကိုလူက စားတယ်။သဘာဝပါဘဲ။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ ဈေးသက်သာရမယ်။ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ အစာတွေရဲ့ အရည်အသွေး မှီရမယ်။ပေါပေါများများ ထုတ်လုပ်နိုင်ရမယ်။ ရီဆိုင်ကယ် လုပ်နိုင်ယင် ကြိုဆိုပါတယ်။
ဟောဗျာ ။ ကြားရုံနဲ့ တင် လေတယ်ဗျာ ။ တော်ပါပြီ ။ ကေသရာဇာ ခြင်္သေ့မင်း ထုံးပဲ နှလုံးမူ မယ် ဗျို့ ။
အစားအစာ ရှားပါးလို့ လုပ်မယ်ဆိုပါလား.. ၀က် ဖြစ်မှတော့ မစင် ကြောက်လို့ မရဘူး ဆိုပြီး ပြောတဲ့ စကားပုံကို ပြင်ရမလို ဖြစ်နေပြီ။
ယ္ခု သီတင်းပတ်အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့် မှတ်သားဖွယ်သတင်းများ ကဏ္ဍကို ယခု တပတ် (၂၈.၆.၂၀၁၁-၅.၇.၂၀၁၁) ကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ အဆင်မပြေမှုများကို တောင်းပန်ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ် သတင်းလင့်များကို ဒီနေရာတွင် ဝေငှနိုင်ပါကြောင်း။ နောင်လာမည့်သီတင်းပတ်တွင် ပုံမှန်တင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား လမ်းပိုင်းတွင် မြစ်ကြီးနားမှ မိုးကောင်းဘူတာ အထိ ပြေးဆွဲနေသော ရှေ့ပြေး APT(Army Pilot Train) ရထားကို ကချင်နှင့်စစ်ကိုင်း နယ်နိမိတ် အစပ်ရှိ နန့်စီအောင် ဘူတာအထိ ပြေးဆွဲမည်
မြေပြိုမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် စခန်းသစ် ကျေးရွာသို့ တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး လူမှုဝန်ထမ်း/ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးနှင့်အဖွဲ့ သွားရောက်ခဲ့ကာ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများ ပေးအပ်
မြ၀တီ-ကော့ကရိတ် လမ်းပိုင်းတွင် ၁၂ ဘီးကား တစ်စီး ချောက်ထဲသို့ ထိုးကျခဲ့သော်လည်း အောက်အထိ မကျခဲ့ လမ်းပိုင်း အချို့တွင်လည်း မြေပြိုမှုများ ဖြစ်ပေါ်
ယခုနှစ် အတွင်း တနင်္သာရီ ကမ်းရိုးတန်းဒေသ တစ်လျှောက် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုများ ပိုမို ကြုံတွေ့လာပြီး ငါးရရှိမှု လျော့နည်းခြင်းများ တွေ့ရှိလာရ
လာမည့် ပညာသင်နှစ်မှစတင်ကာ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ပထမနှစ် စတင်လျှောက်ထားမည့်သူတိုင်း လေးနှစ်တက်ရောက်မှသာ ဘွဲ့ရတော့မည်
၀က်နားရွက်ပြာ ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို အသုံးမပြုရန် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာ
“ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ပထမနှစ် စတင်လျှောက်ထားမည့်သူတိုင်း လေးနှစ်တက်ရောက်မှသာ ဘွဲ့ရတော့မည် ” ကောင်းလိုက်တာ တခြား တက္ကသိုလ်တွေလဲ အဲလိုပြန်ဖြစ်ရင်ကောင်းမယ် ။
The Voice Weekly မှဖော်ပြသော ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်၏ ၆၆နှစ်မြောက် မွေးနေ့ပုံရိပ်များ
သီတဂူ ဆရာတော်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးရှိရန် တောင်းဆို
၁၄ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်ကို သတ်ပြီး မိမိကိုယ်ကိုယ် သေကြောင်းကြံစည်မှု ပဲခူးတွင် ဖြစ်ပွား
ဧည့်လမ်းညွှန် တူညီဝတ်စုံ သတ်မှတ်
ဆိုင်ခန်းရှင် တရုတ်က ရဲကိုဖုန်းဆက်ခေါ်တဲ့အတွက် ရဲတွေရောက်လာပြီး ရန်ပွဲရပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ မူလကတည်းက တရုတ်တွေနဲ့ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရတာ မကျေမချမ်းဖြစ်နေရတဲ့ထဲ ခုလိုကိုယ်ထိလက်ရောက် ဗမာကိုစော်ကားရမလားဆိုပြီး ရာနဲ့ချီတဲ့ ဗမာအုပ်စုက အဲဒီနားမှာဝန်းရံနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ နောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းကတော့ ကျောက်ရောင်းတဲ့ဗမာကုန်သည်က တိမ်းရှောင်နေပြီး အခန်းပိုင်ရှင်တရုတ်ကိုတော့ ရဲစခန်းမှာ ခေါ်ယူမေးမြန်းနေတယ်လို့ ကျောက်ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။ ကျောက်ဝယ်တဲ့ တရုတ်ကတော့ ဟိုတယ်မှာပဲ ရှိနေသေးတယ်လို့ သိရပါတယ်ခင်များ။..
ဘိန်းပဘိန်းပင် တပင်မှ မရှိတော့ဘူးလို့ UWSA ထုတ်ဖော်ပြောဆို
ဝ,နယ်အတွင်း ဘိန်းပင်တပင်မှ မရှိတော့ကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးနေ့မှာ UWSA ဝ,ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေး အဖွဲ့က ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ကျရောက်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးနေ့မှာ UWSA အဖွဲ့ အခြေစိုက် ပန်ဆန်းမြို့နဲ့ ၁၇ မိုင်အကွာ ပန်ဆန်း-မိုင်းမောလမ်းမှာ မီးရှို့ပွဲ အခမ်းအနားတရပ် ကျင်းပပြီး ခုလို ကြေညာလိုက်တာပါ။
ဖမ်းဆီး ရမိထားတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးများ မီးရှို့ပွဲ အခမ်းအနားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး UWSA အဖွဲ့ ပြန်ကြားရေး အရာရှိတဦးက ခုလိုပြောပါတယ်။
“၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တုန်းက ဖမ်းထားတဲ့ ပြည်ပက ဝင်လာတဲ့ မူးယစ်တွေပါ။ ကျနော်တို့ ဝ, နယ်အတွင်းမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး မှောင်ခိုသမားတွေ၊ ဘိန်းဖြူ ဘိန်းမည်း၊ တခြား မူးယစ်ဆေးဝါး ဓာတုပစ္စည်းတွေ ဆေးရည်တွေ ဖမ်းမိတာတွေ ဒယ်အိုးကြီး ၁ဝ အိုးလောက်ရှိတယ်၊ အကုန်လုံး မီးရှို့လိုက်တယ်”
ဒီကနေ့ မီးရှို့ ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ဓာတုဗေဒ ဆေးရည်တွေရဲ့ တန်ဘိုးဟာ ကာလပေါက်ဈေး အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်းရာနဲ့ချီပြီး ရှိနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အခမ်းအနားကို မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး ၆ နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပတာ ဖြစ်ပြီး UWSA/UWSP ခေါင်းဆောင် အသီးသီး တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခမ်းအနားကို တရုတ်နိုင်ငံက ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ဖိတ်ကြားခဲ့ပေမယ့် တက်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ုယုန်လိုက်မယ် တောထဲကို ဟီးဟီး
မချိမဆန့် အလုပ်တွေ ပိနေပေမယ့် သံယောဇဉ်က မကုန်နိုင်တော့ update လုပ်လိုက်ဦးမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဆေးလောက နှင့် ကျင့်ဝတ် အကြောင်းရေးထားသည့်ဆောင်းပါး
လေးစားယုံကြည်မှုဆိုတာ . .
(ဖတ် ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါရန် တိုက်တွန်းပါသည်။)
Platform Marketeers ပလက်ဖောင်းဈေးသည် အကြောင်းရေးထားသည့်ဆောင်းပါး
eros ရေ ပေးထားတဲ့ link ကို သွားဖတ်ပြီးသွားပြီ။ ဆရာစိန်အကြောင်း အရင်ကတည်းက ကြားဖူးနေပြီး လေးစားနေတာ။ ဆေးကုဖို့ အခက်အခဲ ရှိတယ်လို့ သိရလို့ စိတ်တောင်မကောင်းပါဘူး။ သွားလှူလိုက်ပါဦးမယ်။ Share ပေးတာလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
အလှူအတန်းအတွက် သာဓုခေါ်ပါတယ်။ ကိုယ်တင်ဆက်နေတာလေး အကျိုးဖြစ်ထွန်းတာ ကြားရလို့ ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှု တရားရုံး International Criminal Court ICC မှ ကဒါဖီ ကို ဖမ်းရန်အမိန့် ထုတ်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှု တရားရုံး International Criminal Court ICC မှ ကဒါဖီ ကို ဖမ်းရန်အမိန့် ကို ယနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ထို Arrest Warrants အထဲ တွင်
ကဒါဖီ ၇ဲ့ သား Seif al-Isla gadhafi နှင့် အတူ ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲဖြစ်သူ Abdullah al-Sanoussi တို့ ပါဝင်ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
BURMA RELATED NEWS – JUNE 25-27, 2011
Mail & Guardian – Aung San Suu Kyi’s revolution of the spirit
AFP – Actor helps Myanmar poor on final journey
AFP – US says will support UN-backed Myanmar rights probe
AFP – US appeals for safety of Myanmar refugees
IANS – Myanmar:anation on cusp of change
IANS – Ranjan Mathai named India’s new foreign secretary
Bernama – Russia Is Satisfied With Transition To Civilian Rule In Myanmar
Bernama – Police Looking For Two Men To Help Solve Murder Case
Bernama – Asean Foundation Spurs Human Resource Development
Straits Times – Floods affect western, northern Thailand
Bangkok Post – PTT wary of Dawei
New Kerala – The warm-hearted Myanmarese
Grand Island Independent – JBS hires refugees from Burma
BigPond News – Burma burns $48m of seized drugs
KanglaOnline – State stays alert with Blue-ear disease outbreak in Myanmar
Asia Times Online – India hedges its bets in Myanmar
Foreign Policy In Focus – Review: Free Burma
Monsters and Critics – Myanmar parliamentarian delegation in Russia on study tour
guardian.co.uk – Aung San Suu Kyi’s idea of freedom offersaradical message for the west
The Irrawaddy – Security Tightened in Wake of Bomb Blasts
The Irrawaddy – Landslides Brings Border Trade toaStandstill
The Irrawaddy – Press Censors Issue Warning to Rangoon Editors
Mizzima News – Young ‘dragons’ seek to empower the Pa-O community
Mizzima News – Vice President calls for more effort to clean up polluted Inlay Lake
DVB News – Russia ‘satisfied’ as Shwe Mann visits Moscow
DVB News – Burmese, Chinese traders fight in Mandalay
DVB News – MP bids for stronger anti-drugs policy
ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါကြားလို့ ဝမ်းသာနေတာ ဟိုလူဂျီးအလှည့်ကော လာတေးဝူးရား…
ရေးမြို့တွင် ကားနှစ်စီး မီးရှို့ပြီး လူ ၆ ဦး ပြန်ပေးဆွဲ
ကွန်းချမ်း | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၀၈ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ခရီးသည်တင် မှန်လုံကားနှစ်စီးအား မီးတင်ရှို့ကာ ကားသမား ၆ ဦးကို သေနတ်သမားများက
ပြန်ပေးဆွဲသွားမှု မွန်ပြည်နယ် ရေး-သံဖြူဇရပ် အဝေးပြေးလမ်း၌ ဗုဒ္ဓဟူးမနက် ၉ နာရီခန့်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ရှိသူများက ပြောသည်။
ထားဝယ်မြို့နှင့် မော်လမြိုင်၊ ရန်ကုန်သို့ ပြေးဆွဲနေသည့် ရာဇာမင်းနှင့် ရွှေလီရတနာ ခရီးသည်တင် ကားများကို
ရေးမြို့မြောက်ဘက် မိုင် ၃ဝ ကျော်အကွာရှိ သာယာအေးရွာအနီးတွင် မီးရှို့ကာ ယာဉ်မောင်းနှင့် နောက်လိုက် စုစုပေါင်း ၆ ဦးကို ဖမ်းဆီးသွားခြင်းဖြစ်သည်။
“ဦးပဉ္ဇင်းတို့ ကြောက်လို့ ကြည့်တောင် မကြည့်ရဲဘူး။ ကားအစီး ၂ဝ လောက် ရပ်ခိုင်းပြီး၊ ခရီးသည် အားလုံး ကားပေါ်က ဆင်းခိုင်းတယ်။ နောက်တော့ ကားနှစ်စီးကို မီးရှို့လိုက်တာပဲ။ တခြားကားတွေနဲ့ ခရီးသည်တွေကိုတော့ ဘာမှ မလုပ်ဘူး” ဟု သံဃာတော်တပါးကို မဇ္ဈိမကို မိန့်ဆိုသည်။ လက်နက်ကိုင်အင်အား ၂ဝ ခန့် ပါဝင်ပြီး အများစုမှာ လက်နက်ငယ်များ ကိုင်ဆောင်ကာ အချို့မှာ လက်နက်ကြီးများဟု ပြောသည်။
သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် သက္ကော့ရွာသား တဦးကလည်း “ကျနော်သွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာ ကားတွေ အားလုံးပျက်စီးသွားပြီ။ ဘာမှ သုံးလို့ မရတော့ဘူး။ ရဲတွေ စစ်သားတွေလည်း အဲဒီမှာ စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်နေတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့လည် ၁၂ နာရီခွဲတွင် ယခုအခင်းဖြစ်ပွားသောနေရာမှ ၁၅ မိုင်အကွာရှိ သံဖြူဇရပ်မြို့တွင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးဝင်းအတွင်း ဗုံးတလုံး ပေါက်ကွဲခဲ့သေးသည်။ သို့သော်လည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု မရှိကြောင်း အောင်သာယာရပ်ကွက်မှ မျက်မြင်တဦးက ပြောသည်။
“ဘယ်သူ့ လက်ချက်လဲတော့ မပြောသေးဘူး။ အားလုံးက ကားမီးရှို့ခံရတဲ့ဘက်ကို စုသွားကြတယ်ဆိုတော့ မြို့ထဲမှာ စစ်ဆေးမေးမြန်းတာတို့ မရှိသေးဘူး” ဟု သူက ပြောသည်။
၂ဝ၁၁ မေ ၂၂ ရက်နေ့ကလည်း ခရီးသည်တင် မှန်လုံယာဉ် ၅ စီးအား ရေး-သံဖြူဇရပ်လမ်းပိုင်း ကနင်ကမော့ရွာနှင့် လိမ္မော်ခြံရွာအကြား လက်နက်ကိုင် လူတစုက ယာဉ်များအား ပစ်ခတ်ပြီး ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက် ၆ ဦးကို ဖမ်းဆီးသွားခဲ့သေးသည်။
မေ ၂၄ ရက်ထုတ် အစိုးရထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာက ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး လက်ချက်ဟု
ရေးသားခဲ့သည်။သို့သော် KNU က အထက်ပါ လုပ်ရပ်အားလုံး မိမိတို့နှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
မွန်ပြည်နယ်တွင် သံဖြူဇရပ်သာမက ကျိုက်မရောနှင့် မြို့နယ်အချို့၌ လက်နက်များအား ဇွန်လကုန်
နောက်ဆုံးထားကာ အပ်နှံကြရန် ဒေသအာဏာပိုင်များက ညွှန်ကြားထားသည်။
၎င်းမြို့နယ်များအတွင်းရှိ ရွာအချို့တွင် လက်နက်အပ် မွန်ငြိမ်းချမ်း ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ MPDF ၊ ဟောင်သရော ကရင် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ KPF ၊ နယ်ခြားစောင့်တပ် လက်ခံထားသည့် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့နှင့် NMSP ပါတီဝင်အချို့ လက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားနေသည်။
ဗုံးခွဲမှုများအတွက် ရှမ်းအမည်နှင့် လူ ၃ ဦးကို အစိုးရ စွပ်စွဲ
နေပြည်တော်၊ မန္တလေး၊ ပြင်ဦးလွင်တို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှမ်းအမည်နှင့် လူ ၃ ဦးကို ထုတ်ဖော်ပြီး ၎င်းတို့ ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ထုတ် အစိုးရသတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဖောက်ခွဲမှု ပြုလုပ်သူများမှာ အသက် ၂၅ နှစ် အရွယ်ခန့်ရှိကြသည့် စိုင်းဆမ်၊ စိုင်းအိုက်နှင့် စိုင်းကျော်မြင့်ဦးတို့ဖြစ်ပြီ ဗုံးများကို ဖောက်ခွဲရန် နေအိမ်များ ကြိုတင်ငှားရမ်းခြင်း၊ လိုင်စင်မဲ့ကား ၀ယ်ယူခြင်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းစာတွင် ရေးသားထားပြီး ၎င်းတို့ သုံးဦး၏ ပုံပန်းသဏ္ဍန်များကို ဖော်ပြကာ ဗုံးဖောက်ခွဲခဲ့သည့် တရားခံများ ဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲရေးသားထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းဦးက “တရားရုံး အမိန့်မချခင် တရားခံလို့တော့ ဥပဒေမှာ သုံးခွင့်မရှိဘူး။ သံသယရှိ သူလို့ပဲ သုံးရမယ်” ဟု ဆိုသည်။
စွပ်စွဲခြင်းခံရသည့် စိုင်းအိုက်နှင့် စိုင်းဆမ်သည် ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ ၂၄ရက်နေ့ကတည်းက နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် သပြေကုန်းရပ်ကွက်ရှိ ဗုံးကွဲသည့် ဒေါ်သန်းမြင့်၏ နေအိမ်ကို ၆ လစာပေး၍ ငှားရမ်းခဲ့သည့်အပြင် မေလ ၅ ရက်နေ့၌ ပြင်ဦးလွင်ရှိ ဒေါ်စောစန္ဒာ၏ အိမ်ကိုလည်း ၆ လစာပေး ငှားရမ်းခဲ့သည်ဟု သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မန္တလေးမြို့ ဈေးချိုတော် ဟိုတယ်ရှေ့ ဗုံးဖောက်ခွဲရာတွင် သုံးသည့် လိုင်စင်မဲ့ကားကို ငွေကျပ် သိန်း ၆၀ ဖြင့် ကားပွဲစား ဟာရှင်နှင့် ကျော်ကျော်ထက်တို့ထံမှ ၀ယ်ယူခဲ့ပြီး ပြည်သူများ ထိခိုက်သေကျေစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကားဗုံးဖောက်ခွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊
တရားခံများ ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် မင်္သကာသူများ တွေ့ရှိပါက အမြန်ဆက်သွယ် သတင်းပို့ ရန်လည်းရေးသားထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့က နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ချမ်းအေးသာဇံနှင့် ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်တို့တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူသေဆုံးခြင်းမရှိပေ။
ယခုတလော မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗုံးများ မကြာခဏ ပေါက်ကွဲနေရာ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကမှ မိမိတို့ လက်ချက်ဖြစ်သည်ဟု ၀န်ခံပြောကြားခြင်းမရှိသော်လည်း အစိုးရကလည်း ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များက ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲရေးသားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် မေလနှင့် ဇွန်လက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရန်ကုန်-မန္တလေး အမှတ် ၃ အဆန် အမြန်ရထားပေါ်၌ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့် မြို့မဈေးတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွင် KNU ၏ လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရသတင်းစာများတွင် ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်က ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပေါက်ကွဲမှုများကိုမူ မည်သူပြုလုပ်သည်ဟု ဖော်ပြခြင်းမရှိပေ။
၂၀၀၅ ခုနှစ် မေလက ရန်ကုန်မြို့ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ကုန်သွယ်ရေး ဗဟိုဌာန၊ ဒဂုံစင်တာနှင့် ၈ မိုင်လမ်းဆုံရှိ Juntion 8 ကုန်တိုက်များတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဗုံးဆက်တိုက် ပေါက်ကွဲမှုများတွင်လည်း တရားခံအား ယခုအချိန်အထိ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း မရှိသေးပေ။
၂၀၀၅မေလတုန်းက ရန်ကုန်မှာဖြစ်သွားတာ အဆိုးဆုံးပဲ
Myanmar Passenger Service Charges (Airport Tax)
(USD 10) ပြောင်းသွားပါပီ
Sunday, 03 July 2011 00:48 KNG
ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၁၁-ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း KIA တပ်မဟာ ၄ လက်အောက် တပ်ရင်း ၉ ဒေသ၊ မွန်း ၁ နာရီကျော်ချိန် နောင်ရွှေ-နာမ်ဂွတ်လမ်းပိုင်း နောင်ရွှေကွေ့၌ မြန်မာစစ်သား ၁၀ ခန့်ပါသည့် ဖောဝီးလ်ကားတစ်စီးအား တပ်ရင်း ၉ က ဗုံးနှင့် လက်နက်ငယ်ဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ သေဆုံးဒဏ်ရရမှုရှိမရှိကို မသိရပါ။
ကလေးငယ်တစ်ဦးအပေါ် လူမဆန်စွာရက်စက်မှု ဟင်္သာတမြို့တွင် ဖြစ်ပွားကြောင်း
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတမြို့တွင် ပြီးခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ခန့်က အလုပ်ရှင်မှ
(၉) နှစ်အရွယ်ရှိ ၄င်း၏ အလုပ်သမား ကလေးငယ်တစ်ဦးအပေါ် လူမဆန်စွာ
ဖြစ်ပွားပုံမှာ ဟင်္သာတမြို့ ဦးပါရဲဘုရား အရှေ့ဘက်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော U&Me
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှ အလုပ်သမားလေး မောင်ထိပ်ကွက်သည် အလုပ်ရှင်မိသားစုမှ
မွေးမြူထားသော ခွေးကလေးအား ရိုက်နှက်မိခဲ့သဖြင့် အလုပ်ရှင်မှ
ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်၊နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခဲ့သဖြင့် ကလေးငယ်လေးမှာ သေလုမျောပါး
”ကလေးက မိဘမဲ့လေးဗျ၊ သူတို့ဆိုင်မှာအောက်ခြေသိမ်း အကုန်လုပ်ပေးရတာ၊
ထားတော့လည်း ခွေးတွေထားတဲ့နေရာမှာပဲ အတူထားတာ၊သူတို့မွေးထားတဲ့ခွေးကို
ရိုက်မိလို့တဲ့ဗျာ၊ နှိပ်စက်တာမှ တစ်ကယ့်ကို လူမဆန်ဘူး၊
ရိုက်နှက်ထိုးကြိတ်ရုံတင်မကဘူး၊ မီးပူနဲ့ ပေါင်တွေ၊ ကျောတွေကို ကပ်တယ်၊
ခွေးချေးတွေကို ပါးစပ်ထဲထိုးထည့်ပြီး အပြင်ကအ၀တ်နဲ့ ပိတ်စို့ထားပြီး မျက်နှာကို
ကြိုးနဲ့ချည်ထားတာဗျ။ အချိန်မှီ ဆေးရုံမတင်နိုင်ရင် ကလေးက သေတော့မှာဗျ ” ဟု
အမြင်မတော်သူ မျက်မြင်သက်သေတစ်ဦးကပြောပြခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင် ကလေးငယ်မှာ
ဟင်္သာတဆေးရုံတွင် ဆေးကုသခံလျှက်ရှိပြီး ၄င်းအမှုကို ( ပုဒ်မ ၃၂၆၊ ၃၄၂) တို့ဖြင့်
ဒီလို လူသားအချင်းချင်း နှိပ်စက်ညဉ်းပမ်းနေကြတဲ့ ယုတ်မာစိတ်တွေ ပပျောက်ကြဖို
တိုင်းပြည်မှာ စစ်မှန်တဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးဖို့ ဆိုတာ ပြည်သူပြည်သား
တစ်ဦးချင်းစီတိုင်း တရားမျှတတဲ့ စီမံအုပ်ချူပ်မှုကို ရရှိခံစားရဖို့ နဲ့ 
အုပ်ချူပ်သူလူတန်းစားက အစ တရားဥပဒေကို တိကျစွာ လိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့လိုတယ်။
အိမ်မွေးခွေးက မိဘမဲ့ကလေးတစ်ယောက်ထက်များ အဖိုးတန်နေလို့လား
သံမှူးကြီး ဦးကျော်ဝင်း နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့် တောင်းခံ
၀ါရှင်တန် ဒီစီရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး ဒုတိယ အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ သံမှူးကြီး ဦးကျော်ဝင်းဟာ သူ့ရဲ့တာဝန်တွေကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ ဒီကနေ့ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံလိုက်တဲ့ ၀ါရှင်တန် ဒီစီရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး ဒုတိယ အကြီးအကဲဖြစ်သူ သံမှူးကြီး ဦးကျော်ဝင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဓါတ်ပုံ – RFA
နိုင်ငံခြားရေးဌာနမှာ ၁၉၈၀ ခုနှစ်က စပြီး တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ သံမှူးကြီး ဦးကျော်ဝင်း က သူဟာ မြန်မာ အစိုးရ အပေါ်မှာ ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့ သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခဲ့တာ မှန်ပေမယ့် အမှန် ပကတိမှာ ဒီမိုကရေစီ အရိပ်အယောင် မြင်တွေ့ရခြင်း မရှိကြောင်း၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက မြန်မာအစိုးရ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အပေါ် ကန့်သတ် ပိတ်ပင်မှုကို မိမိ ထောက်ခံကြောင်း၊ တပြိုင်နက်မှာပဲ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အနေနဲ့ မြန်မာ အစိုးရ အပေါ် အနီးကပ် ဆက်ဆံမှုတွေကို တိုးချဲ့သင့်ကြောင်း စသဖြင့် အာအက်ဖ်အေ နဲ့ သီးသန့် တွေ့ဆုံရာမှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
Washington, DC 20520 Dated : July 4, 2011
I am writing to inform you that, as of today, I have no choice but to leave the service of the
Government of Myanmar and I am formally requesting political asylum in the United States for
me and my family. After over 31 years of service in the Ministry of Foreign Affairs, I had lost
confidence and my conscience would no longer allow me to work for the government. It has
always been my hope that democratic reform could finally be realized in my country. The truth is
that, despite the election that was held up asademocratic process, the military continues to hold
uncontested power and democratic change under this system will not happen in the foreseeable
As the Deputy Chief of Mission to the Myanmar embassy in Washington, I was responsible for
reaching out to the Washington, D.C.-based diplomatic community, members of Congress, the
media and the governmental and NGO circles. Unfortunately, my efforts of reaching out to
groups and individuals here, and my reports suggesting of actions to improve bilateral relation
between Myanmar and the U.S. have been continually rejected and resulted in my being deemed
dangerous by the government. Because of this, I am also convinced and live in fear that I will be
prosecuted for my actions, efforts and beliefs when I return to Naypyidaw after completing my
tour of duty here.
When I first began my service in the Foreign Ministry I thought that, over time and perhaps
with the help of my efforts, the military would ease its grip and send Myanmar onapath to
greater political pluralism. However, the truth is that senior military officials are consolidating
their grip on power and seeking to stamp out the voices of those seeking democracy, human
rights and individual liberties. Oppression is rising and war against our ethnic cousins is
imminent and at present, threats are being made against Aung San Suu Kyi –they must be taken
I have not left the service of my people, but I have defected from working foragovernment
which is against its countrymen. I know that many in the military believe, like me, that the army
of General Aung San has been corrupted and is now an oppressor of the people, notadefender of
the people. I want to urge them not to fear democracy, but embrace it as the only way forward
that can bring peace to the land we love. They too can become the heroes for whom the army
used to represent by preventing violence and take steps to ease tensions and build respect with
our ethnic minorities.
Madam Secretary, I respectfully want to urge you to use the political will of the United States
to create through an international body,acouncil of inquiry to investigate the human rights
violations that have taken place in the conflict zones of my country by the government’s armed
forces or any other armed groups. I also respectfully urge you to fully implement highly targeted
financial sanctions against the government and their cronies that serve to keep them in power.
These sanctions can playacritical role in denying the regime, and the businessmen who live off
of them, access to the international financial system.
The United States has playedaspecial role in standing up for democracy and freedom in my
country. Please, it is more important than ever that my country not be allowed to disappear
behind the headlines of countries experiencing their own troubles. There are many civil servants
and those in the military who can benefit greatly from greater exposure to the international
community and international norms and values. Continued engagement with my government at
all levels can help openawindow, change the mindset imprinted by the regime, and let them see
an alternative path towards peace and freedom.
Recently, Mongolian President Elbegdorj,astrong supporter of democracy in my country,
spoke in Washington where he stated that “no dictatorship, no military regime, no authoritarian
government can stand against the collective will ofapeople who want to be free.” I could not
agree more and I hope those words start the leaders in Naypyidaw thinking about how to build
meaningful peace and prosperity in Myanmar.
I look forward to devoting my time, energy and my future to the freedom of my homeland. I
thank you for your efforts on behalf of my countrymen and, as the American people celebrate
their Independence Day, we will one day soon celebrate ours. The democracy movement in my
country cannot be crushed. It is alive and well and at some point will prevail.
အမေရိကန်ဆိုင်ရာ မြန်မာဒုသံမှူးက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကလင်တန်ထံ စာရေးပို့
မိုးမခ၊ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၁၁
လွန်ခဲ့သည့် နာရီပိုင်းအတွင်းက မြန်မာစစ်အစိုးရကို စွန့်ခွာပြီး အမေရိကန်ပြည်တွင် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားသူ ဒုသံမှူး ဦးကျော်ဝင်းက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကလင်တန်ထံ တိုက်ရိုက်စာရေးသားပေးပို့သည်ဟု ယုံကြည်စိတ်ချရသည့်သတင်းရင်းမြစ်တခုက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။
အဆိုပါ ပေးစာတွင် ၎င်းက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရာတွင် မြန်မာစစ်အစိုးရကိုယ်စား အမေရိကန်သံတမန်လောက၊ အစိုးရမဟုတ်သော အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ နိုင်ငံရေးလောကနှင့် အသိုင်းအ၀ိုင်းများကို ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သူတဦးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူ ဖြစ်ကြောင်း၊ အမေရိကန်နှင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်စေရန် မိမိ၏ အကြံပြုချက်များကို နေပြည်တော်အစိုးရက အစဉ်တစိုက် ပယ်ချခဲ့ကြောင်း၊ မိမိယခု မြန်မာစစ်အစိုးရကို စွန့်ခွာရခြင်းမှာ မြန်မာပြည်သူများအပေါ် ကျောခိုင်းခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ရေးသားထားသည်။
အမေရိကန်၏ စစ်အစိုးရအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ထောက်ခံကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်တိုင်က မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ လူ့အခွင့်အရေးချိူးဖော်မှုများ၊ ရာဇ၀တ်မှုများကို ဖော်ထုတ်စစ်ဆေး အရေးယူခြင်းကို အမေရိကန်က ထောက်ခံဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း၊ စစ်အစိုးရထောက်ခံသူ စီးပွားရေးသမားများ၊ အလိုတော်ရိများကိုပါ ဆက်လက်ပိတ်ဆို့အရေးယူစေလိုကြောင်း တိုက်တွန်းရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
eros သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စများကြောင့် မန်းလေးဂေဇတ်တွင် လုံးဝရေးတော့မည် မဟုတ်ပါ။ လုံးဝပတ်သတ်တော့မည် မဟုတ်ပါ